MOLOCO Cloud: Dhata-Inotungamirwa, AI-Inowaniswa Nhare Ad Ad Mhinduro dzeMafoni Mapurogiramu | Martech Zone
MOLOCO Cloud ndeye otomatiki yekutenga chikuva chekushambadzira kuwanda pasi rese rinotungamira kuchinjanisa kuchinjisa uye mu-app ad netiweki. Izvozvi zvave kuwanikwa segore-rakavakirwa papuratifomu kune vese vashambadzi veapp, MOLOCO Cloud inofambiswa neyemidziyo yekudzidzira michina tekinoroji iyo inopa simba kune vatengesi vefoni kuti vawedzere yekutanga-bato dhata uye mameseji ezviratidzo kubva kune ese echirongwa ecosystem kuti otomatiki agadzirise kushambadzira kunoenderana akasiyana siyana mashandiro ekuita.
MOLOCO Cloud Zvimiro Zvinosanganisira
Exchanges - svika nhare dzekushambadzira nhare dzinosanganisira MoPub (kambani yeTwitter), Fyber, Vungle, AdColony, Chartboost, Tapjoy, LINE, nezvimwe.
Bhidha Optimizer - chishandiso chitsva chishandiso icho chinogadzirisa otomatiki huwandu hwebhidha hwekutangisa-mutengo wekutengesa mune chaiyo-nguva kuitira kuti vashambadziri vakwanise zvinangwa zvavo vachiita chokwadi chekuti havabhadhare.
Zvirongwa Zvemabhidi - inogadzirisa otomatiki kuti iwedzere kubaya, kutendeuka, kuisa, zviitiko zve-mu-app, kudzoka pane kushambadzira kushambadzira, kana zvimwe zvinangwa zvakaisirwa nemushambadzi.
Limit Ad Ad Tracking (LAT) Targeting - kubvumira vashambadziri kunongedza iOS neApple zvishandiso zvakagonesa LAT, kunyangwe hazvo pasina dhata yekutevera yedhidhi inopfuudzwa. Iyo ficha inoshanda nekutarisa vashandisi zvichibva pane zvemukati mamakisi anouya kubva parizvino chirongwa chikamu, chishandiso chinzvimbo, yakafumisa data-chikamu data, uye mamwe ma parameter, ayo anowanikwa kuburikidza nehukama pamwe ne SDK-yakavakirwa sosi yekupa sosi senge Fyber. LAT Tracking inogonesa vashambadzi kuchengetedza mashandiro kunyangwe Apple yaita yakasarudzika yekuzivisa yevanoshambadzira (IDFA) sarudza-mukati panzvimbo yekubuda kwevashandisi.
MOLOCO Cloud inogonesa vashambadziri venhare kuti vanongedze vateereri vangangotyaire kudzoka kwebhizimusi ravo kune anotungamira epasi-e-ad ad network, nemisika:
Gonesa meseji yako pamamirioni emamirioni maviri nezana nharembozha
Svika pamusoro pemabhiriyoni mana emidziyo yepasi rose uye ukure mhando yemushandisi
Tora vashandisi, dzosera kumashure, wedzera kuita, kurudzira, uye kuwedzera kukosha kweupenyu hwese.
Rova kunetsa kudzoka pane kushambadzira kushandisa (ROAS) zvinangwa nekusunungura simba re data rako
Vashambadziri veApp vanowana kutonga kwakazara pamusoro pehurongwa hwavo hwekushambadzira nehuratidziro uzere mumushandirapamwe wavo wedhata uye mashandiro, kusanganisira yekufungidzira-chikamu dhata dhata iyo isina kugoverwa nemamwe mapuratifomu-edivi mapuratifomu.
Kutanga pane MOLOCO Cloud
Tags: kushambadzira kushambadziraAdColonyaichakagadzirwa njerebhiza optimizerdata-inotyairwa kushambadzira inotengaFyberin-app ad netiwekimu-app kushambadzalat kunangakudzikisira kushambadzira kwekutarisaltvmachine learningnhare dzekushambadzira mhinduronharembozha app kushambadzanharembozha app kushambadzaMolocomoloco goreprogrammatic kushambadziradzoka pane kushambadzira shandisaroasTapjoy